Isiko esidala kunazo zonke futhi esidume kakhulu, esaqala ukusatshalaliswa kusuka e-Asia Minor, eCaucasus naseGreece, ngumvini. Ngesikhathi esifanayo, kusetshenziswa izinhlobo ezimbili eRussia: i-East ne-Europe-Asia.
Izithelo zomvini ziyizitshalo ezingasetshenzisiwe, futhi akubalulekile kakhulu inhlabathi okumele ikhule ngayo, kodwa ayithandi ukuguquka okuvamile. Konke lokhu kungenxa yokuthi izithombo zinezimpande eside kakhulu, ezingafinyelela kumamitha amabili kuya ku-5. Zifinyelela emhlabathini futhi zilimaze uhlelo lwazo kalula. Futhi phawula ukuthi inhlabathi ene-high salts kanye namaxhaphozi ayifanele ukuvuna amagilebhisi.
Izimo zokushisa nokukhanyisa nakho kuthinta ukukhula komvini. Ukutshala lesi sitshalo eningizimu-ntshonalanga, eningizimu naseningizimu-mpumalanga kuyindlela engcono kakhulu, kodwa kubalulekile ukuyifihla emanzini asempumalanga nasesibhakabhakeni ashisayo. Ukuze ukwanda okungcono kwamagilebhisi, sebenzisa izindawo eziseduze nezakhiwo, lapho kukhona ukukhanya okungcono, ohlangothini lwe-leeward. Ngakho-ke, ngemva kokutshala lesi sitshalo, kungaba endaweni eyodwa iminyaka engama-30-50.
Uma unquma ukutshala le berry, okokuqala kufanele ithengwe. Amagilebhisi edolobheni ukuthenga kalula. Izitshalo kufanele zithengwe kusengaphambili futhi mhlawumbe izinhlobo eziningana. Ngakho-ke, izimo ezidingekile zizokwakhiwa ukukhula okuphumelelayo nokuthuthukiswa kwalesi sitshalo.
Amagilebhisi ase-suburbs angatshalwa entwasahlobo noma ekwindla zakuqala. Ngaphambi kwalokhu, umgodi onamaphesenti angama-60 kuya kwangu-100 wenziwa, futhi kungcono ukumba umsele, ubude buzobe buxhomeke enani lezithombo. Khona-ke i-shank ngayinye yomvini ifakwa emgodini. Iba nesilinganiso esiphakeme ngamasentimitha angama-60. Uma utshala, kuyadingeka ukunciphisa ingxenye engezansi yesitshalo ngo-10 cm, bese ususa ingxenye engenhla nhlobo. Izimpande eziyinhloko zokukhula okungcono kufanele ziphathwe ngesisombululo soju, i-heteroauxin noma i-mallet. Emva kwayo yonke inqubo efanele yokutshala amagilebhisi ezindaweni ezisemadolobheni izokhula ngokuphumelelayo njengamanye, izifunda ezingeningizimu.
Akufanele sikhohlwe ukuthi phansi komgodi kumele kubekwe umhlaba ngomcabango ophezulu ovundiwe, ohlanganiswe ne-compost kanye nesidumbu. Uma uhlwanyela ama-cuttings, qiniseka ukuthi iso eliphezulu lingama-4 cm ngaphezulu kwenhlabathi. Izimpande zidinga ukuqondiswa, umgodi ngokwawo ugcwele umhlaba, bese uphuza. Amanzi agxila, futhi umhlabathi uthatheka kancane izinyawo, bese inhlabathi evundile ifafaza enye i-3-4 cm. Inqubo enjalo iyadingeka ukukhohlisa amaqhwa ebusika noma isomiso ehlobo.
Ngemva konyaka kudlule ukutshala, amagilebhisi e-dacha kumele avuliwe ukuze asuse ukhula. Ubudala bomvini bubekwe kuphela kusukela ngonyaka wesibili wenzalo.
Amagilebhisi asezindaweni ezisemadolobheni akhula nge-trellis. Ukuqaphela ikakhulukazi ngesikhathi sokutshala kwalo kufanele kuguqulwe ngenkathi ekwindla, lapho kubalulekile ukulungiselela izihlahla ezibandayo. Ngenxa yalokhu, izinhlobo eziningi ze-frost zakhiwe, futhi kungcono ukubhekana nalolu daba cishe futhi unikeze isitshalo ngokuzivikela ngokumelene nesithwathwa.
Ngentwasahlobo, emva kokuqhaqhaqhwa iqhwa, i-whip encane yomlingani izolala phansi. Kulokhu, ukwesekwa kwamagilebhisi kuzoba ngumsizi ongcono kakhulu.